အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုဖတ်မလဲ? အပိုင်း-၂ - Myanmar Network
Posted by AungKoU (UMK) on November 17, 2012 at 12:11 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခင်တစ်ပတ်ကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းစနစ်များကိုအကြမ်းအားဖြင့် ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်တွင် ၎င်းတို့အနက်မှ Skimmingအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်ပြောပြလိုပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံစာဖတ်သည့်အခါ စာတစ်ပုဒ်လုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းထက်အဓိကဆိုလိုရင်းအကြောင်းအရာများကိုဦးတည်ဖတ်ရှုရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ထိုအခါ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်၊ စာပုဒ်တစ်ပုဒ် (သို့မဟုတ်) စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကို ခြုံငုံ၍ ဆိုလိုရင်းအကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်ကိုသာရရှိရန်အမြန်ဖတ်သောနည်းစနစ်တစ်မျိုးကို Skimming ဟုဆိုနိုင်သည်။စာအုပ်တစ်အုပ်တည်း၊ စာပုဒ်တစ်ပုဒ်တည်း၊ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တည်းတွင်မိမိလိုအပ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများအားလုံးပါဝင်သည်မှာရှားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ကိုရှာဖွေဖတ်ရှုရန်အတွက် Skimming ကိုအသုံးပြုကြရသည်။ ဥပမာစာသင်ခန်းတွင် ဆရာ၊ဆရာမများကနောက်တစ်ပတ်တွင် ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးလိုအပ်သောစာအုပ်များဖတ်ခိုင်းသည့်အခါ စာအုပ်တွင် ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများအားလုံးကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုပြရန်မလိုသည့်အတွက် အားလုံးကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ရန် မလိုအပ်ပါ၊ သို့ရာတွင် ပေးထားသောအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်များကိုဆွေးနွေးနိုင်ရန်ပေးထားသည့်ခေါင်းစဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဓိကဆိုလိုရင်းအကြောင်းအရာများကိုသာဦးတည်ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် စာကြည့်တိုက်၊ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် စာအုပ်ငှားသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) ဝယ်သည့်အခါ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကိုအသေးစိတ် ဖတ်ရန်မလိုအပ်ဘဲလိုချင်သည့်အကြောင်းအရာများ ပါ၊ မပါသိရှိရန်စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး၏စ၊လယ်၊ဆုံးကိုSkim လုပ်ပြီး မြန်မြန်ဖတ်ကာဆုံးဖြတ်ရပါမည်။စာရေးသူအမည်၊ စာအုပ်အမျိုးအစား၊ ဇာတ်လမ်းအနေအထားများကို Skim လုပ်ပြီးလိုချင်သည့် စာအုပ်ကိုရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာ၊ စာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုဖတ်ရှုရန်လိုအပ်သည့် အတွက် Skimming က စာဖတ်သူအတွက် အချိန်ကိုသက်သာစေပါသည်။ Skim လုပ်ရန်အတွက် စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးအမြန်ဖတ်ပြီးလျှင်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ် ဖတ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ စကားလုံးတိုင်းကိုဖတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။သို့ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံအဓိကအကြောင်းအရာများကိုမျက်စိလျှမ်းတတ်သည်ကိုလည်းသတိထားရမည်။ ပထမဆုံးစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် စာအုပ်တွင် ပါဝင်သောမိတ်ဆက်စကား၊ နိဒါန်း၊ ခေါင်းစီး၊ခေါင်းစဉ်ခွဲများ၊ ရုပ်ပုံအညွှန်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဇယားများ၊ စာလုံးအမည်းများ၊ စာလုံးစောင်းများ၊ မျဉ်းသားထားသောစကားလုံးများ၊ ဇာတ်လမ်းအချိတ်အဆက် သဘောတရားများ၊ သုံးသပ်ချက်၊ စာအုပ်အညွှန်းများစသည်တို့ကို Skim လုပ်ရမည်။
လိုအပ်သောအချက်အလက်များပါဝင်သည့်စာမျက်နှာကိုသိရှိရန် မာတိကာကိုဦးစွာဖတ်ပါ၊ အခြားသောဆက်စပ်သည့်အကြောင်းအရာများဖော်ပြထားသည့်နေရာကိုလည်းတပြိုင်တည်းဖတ်ပြီးမှတ်ခဲ့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာများတွင်စာပိုဒ်များ၏ ပထမစာကြောင်းများကိုဦးစွာဖတ်ပါ၊ ပထမစာကြောင်းများတွင် စာရေးသူပြောလိုသောယေဘုယျ အကြောင်းအရာကိုတွေ့နိုင်သည်။
Here I want to try to give you an answer to the question: What personal qualities are desirable in apple teacher? Probably no two people would draw up exactly similar lists, but I think the following would be generally accepted.
First, the teacher's personality should be pleasantly live and attractive. This does not rule out people who are physically plain, or even ugly, because many such gave great personal charm. But it does rule out such types as the over-excitable, melancholy, frigid, sarcastic, cynical, frustrated, and over-bearing: I would say too, that it excludes all off dull or purely negative personality. I still stick to what I said my earlier book: that school children probably 'suffer more from bores than from brutes'.
Secondly, it is not merely desirable but essential forateacher to haveagenuine capacity for sympathy- in the literal meaning of that word;acapacity to tune in to the minds and feelings of other people, especially, since most teachers are school teachers, to the minds and feelings of children. Closely related with this is the capacity to be tolerant- not, indeed of what is wrong, but of the frailty and immaturity of human nature which induce people, and again especially children, to make mistakes.
Thirdly, I hold it essential forateacher to be both intellectually and morally honest. This does not mean beingaplaster saint. It means that he will be aware of his intellectual strengths, and limitations, and will have thought about and decided upon the moral principles by which his life shall be guided. There is no contradiction in my going on to say thatateacher should beabit of an actor. That is part of the technique of teaching, which demands that every now and thenateacher should be able to put on act- to enlivenalesson, correctafault, or award praise. Children, especially young children, live inaworld that is rather larger than life.
A teacher must remain mentally alert. He will not get into the profession if of low intelligence, but it is all too easy, even for people of above-average intelligence, to stagnate intellectually and that means to deteriorate intellectually. A teacher must be quick to adapt himself to any situation, however improbable and able to improvise, if necessary at less thanamoment's notice.
(Here I should stress that use 'he' and 'his' throughout the book simply asamatter of convenience.)
ကျန်ရှိနေသည့်စာကြောင်းများကိုလည်းချန်မထားဘဲအမြန်ဆက်ဖတ်သွားပါ၊ စာရေးသူများသည် ပထမစာကြောင်းများတွင် ဆိုလိုရင်းကိုဖော်ပြလေ့ရှိကြသည့်အတွက် ၎င်းက အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံး၏ ဆိုလိုရင်းကို ခြုံငုံနားလည်စေနိုင်သည်။ စာဖတ်စဉ်တွင်စာလုံးအမည်းများ၊ စာလုံးစောင်းများ၊ မျဉ်းသားထားသောစကားလုံးများတွေ့ပါကခဏရပ်ပါ၊စာရေးသူပြောလိုသောအဓိကစကားလုံးများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံနားလည် သောအခါ ကျန်သည့်စာပိုဒ်များတွင်အဓိကအချက်များကိုသာရွေးချယ်ဆက်ဖတ်ပါ၊ မလိုအပ်သည်များကိုကျော်ဖတ်ပါ၊ စာဖတ်စဉ်တွင် မျက်လုံးကိုဘယ်မှညာသို့ရွေ့ပြီးအမြန်ဖတ်ပါ၊ မျက်လုံးကိုမရွေ့တတ်လျှင် ဘောပင်၊ခဲတံ (သို့မဟုတ်) လက်ညှိုးထောက်ပြီးလည်းဖတ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသောစကားလုံးများ၊ စကားစုများကိုသတိပြုမိပါစေ။စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်စီတွင် ပါဝင်သောအဓိကအကြောင်းအရာများကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားဖတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံအဓိကအကြောင်းအရာများသည် စာပိုဒ်၏အစတွင်သာမကဘဲအလယ်၊ အဆုံးတွင်လည်းပါရှိတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်လုံးတွင်ပင်လျှင် အဓိကအချက်များမပါဝင်တတ်ပါ။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်သည် စာရေးသူဆိုလိုချင်သောအကြောင်းအရာများ၏ အနှစ်ချုပ်၊ သုံးသပ်တင်ပြချက်များဖြစ်တတ်သောကြောင့် သတိထားပြီးအားလုံးကိုဖတ်သင့်ပါသည်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်လျှင်လည်းအထက်ဖော်ပြပါနည်းအတိုင်းပင်စာရေးသူအမည်၊ စာအုပ်အမည်ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်မာတိကာကိုဦးစွာဖတ်ပါ၊ အခန်းတစ်ခုစီတွင် ပထမစာပိုဒ်များကိုအနည်းငယ်စီဖတ်ပါ၊ မလိုအပ်သည်များကိုထားခဲ့ပြီးဇာတ်လမ်း၊ အကြောင်းအရာအချိတ်အဆက်ကိုနားလည်စေရန် အလယ်တွင်အနည်းငယ်ဆက်ဖတ်ပါ၊ ရုပ်ပုံအညွှန်းများပါလျှင် ၎င်းတို့ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ဆိုလိုရင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးခန်းကိုအနည်းငယ်ဆက်ဖတ်ကြည့်လျှင် ဇာတ်သိမ်းခန်း (သို့) သုံးသပ်တင်ပြချက်ကိုသိရပြီဖြစ်သောကြောင့်ယေဘုယျဇာတ်လမ်းသဘော၊ စာအုပ်၏ဆိုလိုရင်းနားလည်လျှင် လိုအပ်ချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ အဆင့်လိုက် အားလုံးဖတ်ပြီးသောအခါ ဇာတ်လမ်း၊ စာအုပ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ အနှစ်ချုပ်၊ စာလုံးမည်းများ၊ စာလုံးစောင်းများ၊ မျဉ်းသားထားသောစကားလုံးများ၊ အဓိကအချက်များကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုပြီးရရှိလိုက်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ညှိနှိုင်းသုံးသပ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံ Skim လုပ်စဉ်တွင် မျက်စိလျှမ်းပြီးကျန်နေခဲ့သောအချက်အလက်များကိုသုံးသပ်ချက်၊ အနှစ်ချုပ်များမှ ပြန်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Skimming ဖြင့်ဖတ်သည်ဟုဆိုသော်လည်းအကြောင်းအရာအားလုံးကို skim လုပ်၍မရပါ၊ Skimming သည် သာမန် စာဖတ်နှုန်းထက် လျှင်မြန်စွာဖတ်ရသော်လည်းအကြောင်းအရာအားလုံးကိုအရှိန်(speed) အတူတူဖတ်၍ မရသည်ကိုသတိထားပါ။စာအုပ်၏ မိတ်ဆက်နိဒါန်း၊ နောက်ဆုံးသုံးသပ်ချက်၊ အဓိကအကြောင်းအရာများပါဝင်သောဝါကျများ၊ မရင်းနှီးသောစကားလုံးများ၊ အနည်းငယ် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောစာကြောင်းများကိုဖတ်ရာတွင် စာဖတ်သည့် အရှိန်(speed) ကိုအနည်းငယ် လျှော့ကာဖတ်သင့်သည်။ Skimming ကိုစနစ်တကျ လေ့ကျင့်ဖတ်ရှုလျှင် စာအုပ်တစ်အုပ်၏ ဆိုလိုရင်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သောကြောင့် စာအုပ်များစွာကိုအချိန်သက်သာစွာဖတ်ရှု နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူသူများအားလုံးအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ရာတွင်တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျှက် လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေလိုက်ပါသည်။
ဘယ်လိုဖတ်မလဲ (၂)-Skimming.pdf, 134 KB
Permalink Reply by Zaw Win on November 19, 2012 at 13:57
Reading is our best friend.
I appreciate you who have goodwill.